Rahoviana no hikaroka, fanaraha-maso ary mandà backlinks hanatsarana ny laharan'ny fikarohana | Martech Zone
Niasa ho an'ny mpanjifa roa any amin'ny faritra roa aho izay manao ny serivisy an-trano mitovy. Ny Client A dia orinasa efa miorina manana traikefa 40 taona eo ho eo ao amin'ny faritra misy azy. Ny Client B dia vaovao miaraka amin'ny traikefa 20 taona eo ho eo. Nahavita nametraka tranokala vaovao tanteraka izahay rehefa avy nanao fikarohana ho an'ny mpanjifa tsirairay izay nahita paikady fikarohana organika manahirana avy amin'ny masoivohony tsirairay avy:
hevitra - Namoaka pejy an-jatony ireo masoivoho miaraka amin'ny famerenana tokana amin'ny tsirairay izay misy votoaty kely ivelan'ny serivisy ary fehezanteny vitsivitsy ao anaty famerenana. Niharihary fa ny tanjon'izy ireo teto dia ny hanandrana hampiasa teny fototra ho an'ny jeografia sy ny serivisy omena.
Pejy isam-paritra - Namoaka pejy anatiny am-polony ireo masoivoho izay namerina ny votoatin'ny serivisy an-trano nomena saingy nanondro tanàna na faritany hafa amin'ny lohateny sy vatana. Mitovy ny tanjona teto… ny hiezaka hampiasa teny fototra ho an'ny jeografia sy ny tolotra omena.
Tsy milaza aho hoe tetika izany tsy afaka raha ampiasaina, dia fampiharana mibaribary sy mibaribary fotsiny ny votoaty izay mikendry ny faritra sy ny serivisy. Tsy mpankafy an'ity tetika ity mihitsy aho, nahita fahombiazana mahatalanjona izahay tamin'ny famaritana tsotra ny faritry ny serivisy ao amin'ny footer, ao anatin'izany ny adiresin'ny toeram-piasana ao amin'ny footer, ao anatin'izany ny laharan-telefaona (miaraka amin'ny faritra eo an-toerana. code), ary avy eo dia mamoaka fampahalalana matanjaka ao amin'ny vatan'ny pejy momba ny serivisy.
Tsy misy mihitsy antony mahatonga ny pejin'ny tafo, ohatra, tsy ho voalahatra tsara ho an'ny “Contractor Tafo” any amin'ny faritra rehetra iasan'ny mpiantoka. mamorona sy manara-maso pejy maromaro ho an'ny mpanjifa iray.
Ny tena ratsy indrindra dia samy tsy nahazo fitarihana tamin'ny tranokalany ireo mpanjifa roa ireo ary tsy nihena ny laharan'izy ireo tao anatin'ny herintaona mahery. Ary koa, ny masoivohon'izy ireo tsirairay dia nanana ny tranokala ary ny masoivoho iray aza nanana ny domain registration. Noho izany… ny vola rehetra nampiasain'izy ireo dia tsy nanetsika azy ireo hanakaiky kokoa ny tena fampandrosoana ny orinasany. Nanapa-kevitra ny hanome ny orinasako izy ireo mba hampiasa paikady vaovao.
Ho an'ny mpanjifa roa dia niasa izahay fanatsarana ny fikarohana eo an-toerana fahitana amin'ny alàlan'ny fananganana tranokala vao nohatsaraina, fakana drôna ary alohan'ny / aorian'ny sarin'ny tena asany fa tsy sarin-tsarimihetsika, natomboka ny famerenana ny fampielezan-kevitra, nanavaka azy ireo tamin'ireo mpifaninana aminy, navitrika araka ny tokony ho izy ireo rohy anatiny an'arivony mankany amin'ny pejy mety, ary efa miasa amin'ny fanitarana ny fahafahan'izy ireo amin'ny YouTube, sosialy, lahatahiry ary lahatahiry mpiantoka ny mpanamboatra.
Rahoviana no hanao Audit Backlink
Ny zava-nitranga manaraka dia nilaza hoe:
mpanjifa A – izay niasay ela indrindra, dia tsy nanatsara ny fahitan'izy ireo ny milina fikarohana ivelan'ny teny fanalahidy misy marika. Nanohy nanatsara ny pejy izahay, nampifandraisina tamin'ny YouTube, nanavao ny lahatahiry maherin'ny 70… ary mbola zara raha misy hetsika. Nahita i Key teny lakile tsy misy marika tsy miakatra mihitsy… nalevina ao amin'ny pejy faha-5 na mihoatra.
mpanjifa B – tao anatin'ny herinandro namoahana ny tranokalany dia nilaza izy ireo fa nahazo fitarihana tsara izy ireo, ary niakatra ny laharan'izy ireo tsy misy marika teny fanalahidy.
Rehefa avy nikaroka ny fifaninanana nataon'izy ireo sy nanatsara ny pejiny nandritra ny herinandro izahay dia tsy maintsy nandinika lalina ny antony mpanjifa A tsy nihetsika. Noho ireo paikady mampiahiahy efa napetraka dia te-hijery ny kalitaon'ny backlinks ao amin'ny tranokalany izahay. Tonga ny fotoana hanaovana a audit audit!
Ny fanaraha-maso backlink dia mamaritra ny rohy rehetra mankany amin'ny tranokalany na pejy anatiny ary manadihady ny kalitaon'ny tranokala misy ny backlink. Ny fanaraha-maso backlink dia mitaky antoko fahatelo SEO fitaovana… ary mampiasa aho Semrush. Amin'ny alalan'ireo fanamarinana ireo dia azonao atao ny mamantatra ireo rohy avy amin'ny tranokala avo lenta ary koa ny backlinks ratsy (fantatra amin'ny anarana hoe poizina) izay tokony esorinao na hampandrenesinao an'i Google.
Inona no atao hoe Backlinks ratsy?
Ity misy horonan-tsarimihetsika tsara momba ny backlinks sy ny rohy ratsy, ny fomba ampiasain'ireo mpampiasa blackhat SEO, ary koa ny antony maha-fanitsakitsahana ny fepetran'ny Google ary tokony hialana amin'ny vidiny rehetra.
Backlink Audits sy ny fandavana Backlinks
mampiasa SemrushNy fanaraha-maso backlink's, dia afaka nijery mazava tsara ireo sehatra sy pejy nanondro ny tranokalany izahay:
Azafady, tadidio fa ny fitaovana toy izany Semrush mahagaga fa tsy afaka mamakafaka ny toe-javatra rehetra ho an'ny mpanjifa tsirairay. Misy fahasamihafana goavana, ara-statistika, eo amin'ny orinasa madinika eo an-toerana sy ny serivisy iraisam-pirenena na amin'ny fiteny maro an-tserasera. Ireo fitaovana ireo dia mazàna mitondra azy roa mitovy izay heveriko fa voafetra be. Amin'ity tranga ity ny mpanjifa:
Ambany Total - Raha milaza ity tatitra ity, tonga lafatra, Tsy manaiky aho. Ity sehatra ity dia manana backlinks feno ambany ka ny fananana backlink tena misy poizina - raha ny hevitro - dia olana.
Quality – Raha rohy iray ihany no voasokajy ho misy poizina, Nahita rohy maromaro hafa aho izay ahiahiana ao anatin'ny fanaraha-maso fa voamarika eo ambanin'ny tokonam-baravarana misy poizina ho azo antoka. Tao amin'ny pejy tsy azo vakina izy ireo, tao amin'ny sehatra tsy misy dikany, ary tsy nitondra fifamoivoizana momba ny tranokala.
Inona no atao hoe Disavow?
Google dia manome fomba iray hampahafantarana azy ireo rehefa misy ireo rohy ratsy ireo, fantatra amin'ny anarana hoe a disavow. Azonao atao ny mampakatra rakitra an-tsoratra tsotra mitanisa ireo sehatra na URL tianao hialana amin'ny tondron'ny Google rehefa manapa-kevitra ny tokony ho laharam-pahamehana ny tranokalanao.
disavow – Namaky lahatsoratra maromaro aho tamin'ny Internet izay nampiasan'ireo matihanina SEO ny fitaovana tsy manara-penitra mba hitaterana malalaka ireo sehatra sy pejy marobe amin'ny Google. Somary mpandala ny nentin-drazana kokoa aho amin'ny fomba fiasako… manadihady ny rohy tsirairay momba ny kalitaon'ny tranokala, ny fifamoivoizan'izy ireo, ny filaharana ankapobeny, sns. Ataoko antoka fa avela irery ny backlinks tsara ary rohy mampiahiahy sy misy poizina ihany no lavina. Mazàna aho dia misafidy amin'ny lafiny fandavana sehatra iray manontolo noho ny pejy ihany koa.
Raha tokony hampiasa ny fitaovan'ny disavow an'i Google ianao, dia azonao atao koa ny manandrana mifandray amin'ny tompon'ny tranonkala manondro mba hanesorana ny rohy… fa amin'ireo tranonkala misy spammy sy misy poizina ireo dia hitako matetika fa tsy misy valiny na tsy misy fampahalalana mifandray mihitsy.
Ny fitaovana azo alaina amin'ny Semrush dia tena noheverina tsara mba hitazonana ny tranokalanao na ny mpanjifanao. profil backlink. Ny sasany amin'ireo endri-javatra omen'ny fitaovana:
Overview – ny tatitra hitanao etsy ambony.
Hanaraha-maso – lisitra feno amin'ny backlink rehetra hita ho an'ny tranokalanao, ny poizina izany, ny pejy ahatongavana, ny lahatsoratra vatofantsika, ary koa ny hetsika azonao atao, toy ny fanaovana whitelist azy na ny fampidirana ny sehatra na pejy amin'ny rakitra lahatsoratra mandà.
disavow – ny fahafahana mampakatra ny fisie fandavanao amin'izao fotoana izao ho an'ny vohikala iray na misintona fisie fandavana vaovao hampidirina ao amin'ny Google Search Console.
Tracking - miaraka amin'ny fampidirana amin'ny Google Search Console sy Google Analytics, ny tsy fanekenao dia azo arahana ao anatin'ny anao Semrush tetikasa hijerena ny fiantraikan'izany.
Ity misy pikantsarin'ny audit audit … Tsy maintsy nanala ny mombamomba ny mpanjifa tao amin'ny sehatra, tanjona ary lahatsoratra vatofantsika aho satria tsy tiako ny hifaninana hahita hoe iza no miasa.
Ny fisie lahatsoratra mandà izay namboarin'i Semrush sy tazonina ho anao dia tonga lafatra, nomena anarana miaraka amin'ny daty ary misy fanehoan-kevitra ao amin'ny rakitra:
Ny dingana manaraka dia ny mampakatra ny rakitra. Raha tsy hitanao ny Fitaovana Disavow an'ny Google ao amin'ny fampiononana fikarohana, ity misy rohy ahafahanao mampakatra ny rakitrao Disavow:
Google Search Console Disavow rohy
Rehefa avy niandry herinandro 2-3, dia mahita hetsika amin'ny teny fanalahidy tsy misy marika izahay. Ny disavow dia miasa ary ny mpanjifa izao dia afaka mampitombo ny fahitana fikarohana tsy misy marika.
Aza mandoa vola amin'ny Backlinks
Ny heveriko dia ny orinasa farany nitantana ny tranokalan'ny mpanjifa dia nanao backlinking karama mba hanandrana hanatsara ny laharan'izy ireo amin'ny ankapobeny. Orinasa mampidi-doza ity… fomba tsara hanesorana ny mpanjifanao izany ary handrava ny fahitan'izy ireo motera fikarohana. Angataho foana ny hanambaran'ny masoivoho anao raha toa ka manao an'io karazana asa io izy ireo taloha.
Raha ny marina dia nanao fanaraha-maso backlink ho an'ny orinasa iray mandeha ampahibemaso aho ary nampiasa vola be tao amin'ny orinasa SEO taona maro lasa izay. Afaka nanara-maso mora foana ireo rohy niverina tany aho fambolena rohy Nanangana izy ireo mba hampitomboana ny fahitan'ny mpanjifany. Nandao ny fifanarahana avy hatrany ny mpanjifako ary nasainy niasa tamin'ny fandavana ireo rohy. Raha ny mpifaninana, ny haino aman-jery, na ny Google no namaritra ireo rohy ireo, dia mety ho rava ny orinasan'ity mpanjifa ity… ara-bakiteny.
Araka ny nohazavaiko tamin'ny mpanjifako… raha azoko atao ny mijery ireo rohy mankany amin'ny orinasa SEO miaraka amin'ny fitaovana toy izany Semrush. Azoko antoka fa afaka manao algorithm amin'ny fananganana PhD an'arivony ao amin'ny Google ihany koa aho. Mety nampitombo ny laharana izy ireo tao anatin'ny fotoana fohy, saingy tamin'ny farany dia ho tratra nandika ny fepetran'ny serivisy Google izy ireo ary - tamin'ny farany - hanimba ny marika tsy azo havaozina. Tsy lazaina intsony ny fandaniana fanampiny amin'ny fanaovana ny audit, ny backlink forensika, avy eo dia mandà ny hitazona azy ireo hilentika.
Ny fomba tsara hahazoana backlinks dia ny mahazo azy ireo. Manangana votoaty lehibe amin'ny haino aman-jery rehetra, zarao ary hampiroborobo ny votoaty lehibe amin'ny fantsona rehetra, ary hahazo rohy miverina tsy mampino ianao. Asa mafy nefa tsy misy risika amin'ny fampiasam-bola ataonao.
Misoratra anarana amin'ny Semrush
Raha sahirana amin'ny filaharana ianao ary mila fanampiana, dia manampy mpanjifa maromaro izahay amin'ny ezaka fanatsarana ny milina fikarohana. Anontanio ny momba antsika SEO consulting ao amin'ny tranokalanay.
Fampahafantarana: Mpampiasa herinaratra aho ary mirehareha amin'ny Semrush ary mampiasa ny rohy mifandray amiko aho mandritra ity lahatsoratra ity.
Tags: audit auditbacklink forensikamombamomba ny backlinkfanovana rohybacklinksbacklinks ratsyrohy ratsydisavowkonsole fikarohana googleny fomba hanaovana audit backlinkny fomba fikarohana backlinksdetox rohyrohy forensicslinkresearchtoolsbacklinks aloafikarohana OptimizationsemrushFitaovana backlink SemrushSEObacklinks misy poizina
Mar 5, 2013 ao amin'ny 1: PM PM
Toa fantatrao fa nanao izany aho androany alina. Nanao fanadiovana ny backlinks rehetra fa amin'ny pejin-tranonkala amin'ny alàlan'ny famadihana ny URL fa tsy 301ing azy ireo - PITA goavana. Haharitra volana maromaro izany fa izay no antony ahazoako satroka mainty.
Tsy maintsy mandà ho an'ny pejy fandraisana
Sep 6, 2013 amin'ny 11: 31 AM
Fomba tsotra izany ry namana . Midira fotsiny amin'ny LinkResearchTools ary ny ambiny dia hataony ho azy. Namaky lahatsoratra momba ny fomba hisorohana ny Penguin amin'ny fomba manual aho. http://www.technologyace.com/internet-marketing/seo/recover-blogwebsite-google-latest-penguin-2-0-update/
27 Novambra 2013 à 6:42
Rehefa nampiasa Link Research sy Link Detox aho dia tena diso fanantenana tamin'ny serivisy sy ny vokatra. Tsy dia betsaka no nitranga, ary tsy nomena fanampiana firy aho rehefa nila izany. Nanapa-kevitra ny hampiasa ny The Link Auditors aho mba handaminana ny backlinks taorian'ny nahitako hevitra tsara tamin'ny sehatra samihafa. Tsara kokoa ny fanompoan’izy ireo! Manana ekipa eo an-tanana foana izy ireo hanampy anao amin'ny fanontaniana na torohevitra. Tamin'ny fampiasana ny fitaovan'ny The Link Auditors, dia afaka nahita ireo rohiko misy poizina rehetra aho, ary nesorina tanteraka. Jason, ilay mpikambana niresahako, dia tena nanampy tamin'ny fanohanana an-telefaona. Nihaino ny olako izy ary nilaza mazava tsara izay tsy nety. Rehefa nanao izany izy dia nilaza tamiko izay fitaovana mety indrindra amiko.
Amin'ny fampiasana ny fitaovan'ny The Link Auditors, dia nahazo angon-drakitra be dia be aho, hitako tsara hoe iza amin'ireo rohy no nanimba ahy ary fantatro hoe iza no rohy mila esorina. Ny fampiasana ny fitaovana fanalana azy ireo dia tena mora satria mandeha ho azy tanteraka ary tena haingana. Nampiasa fitaovana fanalana isan-karazany aho izay hita tao amin'ny Internet, ary ny azy ireo no tsara indrindra!
28 Novambra 2013 à 4:31
Nampiasa ny The Link Auditors koa aho. Nanampy ahy be dia be izy ireo tamin'ny fanaraha-maso nataoko, nanome fanohanana rehefa nila izany aho ary nanazava tamiko ny olako. Misaotra anao nandefa ity satria heveriko fa tokony ho fantatry ny olona bebe kokoa momba azy ireo. Ny serivisy atolotr'izy ireo dia mahafinaritra fotsiny, azo itokisana ary mora tanterahina.